Ingabe Kufanele Wakhe Noma Uthenge Ipulatifomu Yakho Yokumaketha elandelayo? | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 16, 2014 NgoLwesine, Februwari 25, 2021 Douglas Karr
Muva nje, ngibhale indatshana ngeluleka izinkampani hhayi ukusingatha ividiyo yabo. Kube nokuhlehla okuthile kuyo kusuka kwabanye ochwepheshe abakuqonda ukungena nokuphuma kokusingathwa kwamavidiyo. Babenamaphuzu amahle, kepha ividiyo idinga izethameli, futhi amapulatifomu amaningi abanjwe ahlinzeka ngalokho nje. Ngakho-ke ukuhlanganiswa kwezindleko zomkhawulokudonsa, ubunzima besayizi yesikrini, nokuxhuma, ngaphezu kokutholakala kwezithameli kwakuyizizathu zami eziyinhloko.
Lokho akusho ukuthi angikholwa ukuthi izinkampani akufanele zithathe isikhathi eside ekwakheni izixazululo zazo. Endabeni yevidiyo, isibonelo, izinkampani eziningi ezinkulu zihlanganise isu labo lamavidiyo ne ukuphathwa kwempahla edijithali izinhlelo. Yenza umqondo ophelele!
Eminyakeni eyishumi eyedlule lapho amandla wekhompyutha ebiza kakhulu, umkhawulokudonsa ubiza kakhulu, futhi intuthuko bekufanele yenziwe kusukela ekuqaleni, bekungeke kube yinto encane ukuzibulala kwenkampani ukuzama ukwakha isisombululo sayo sokumaketha. Isoftware njengabahlinzeki Bensizakalo ichithe izigidigidi embonini ukwenza amapulatifomu angasetshenziswa iningi lethu - ngakho-ke kungani ungenza lolo lwazi? Akubuyiswanga kuyo futhi uzoba nenhlanhla uma uke wayisusa phansi.
Ukushesha phambili namuhla, noma kunjalo, amandla wekhompyutha kanye ne-bandwidth kuningi. Futhi intuthuko ayidingi ukwenziwa kusukela ekuqaleni. Kunamapulatifomu anamandla wokuthuthuka asheshayo, amapulatifomu wedatha enkulu, nezinjini zokubika ezenza ukuthola umkhiqizo kungabizi futhi kusheshe. Ukungakhulumi ngenani elikhulu lezinto ezingabizi API (application programming interface) abahlinzeki abaphuma emakethe. Umthuthukisi oyedwa angakwazi ukufaka ucingo ngeplatifomu enesixhumi esibonakalayo sezokuphatha bese exhuma kufayela le- API endabeni yemizuzu.
Ngalezi zizathu, siguqule ukuma kwethu ezimweni eziningi. Izibonelo ezimbalwa engingathanda ukwabelana ngazo:
I-CircuPress - Ngenkathi ngishicilela incwadi yami yezindaba kwabangamashumi ayizinkulungwane ababhalisile, bengisebenzisa imali eningi kumhlinzeki we-imeyili kunokuba bengithola imali engenayo yesikhangiso ngalelo sayithi. Ngenxa yalokhu, ngisebenze nomngani wami ukuthuthukisa iplatifomu yezentengiso ye-imeyili ehlanganiswe ngqo neWordPress. Ngamarandi ambalwa njalo ngenyanga, ngithumela amakhulu ezinkulungwane zama-imeyili. Ngolunye usuku sizoyikhipha kuwo wonke umuntu!
I-SEO Data Miner - Highbridge wayenomshicileli omkhulu kakhulu owayenamagama angukhiye angaphezu kwesigamu sesigidi adinga ukulandelelwa ngokwendawo, ngohlobo lomkhiqizo nangesihloko. Bonke abahlinzeki abangaphandle ababezobhekana nalokhu babekwezinombolo eziphakeme ezinhlanu zokuthola amalayisense - futhi akekho noyedwa kubo ongaphatha ivolumu yedatha abanayo. Futhi, banesakhiwo esiyingqayizivele sesayithi nemodeli yebhizinisi engalingani kupulatifomu ekheniwe. Ngakho-ke, ngentengo yelayisense kwenye isoftware, sikwazile ukukhiqiza ipulatifomu eqondene ngqo nemodeli yebhizinisi labo. Konke ukutshalwa kwemali abakwenzayo akulona utshalomali kwilayisense abazohamba ngalo - kuthuthukisa ipulatifomu yabo futhi kuyenze isebenze kakhulu ngaphakathi. Bonga isikhathi sokuhlaziya nesokucubungula esibalulekile ngokubakhela ipulatifomu.
I-Agent Sauce - ithuthukiswe eminyakeni eyishumi edlule ngumngani wami, u-Adam, ipulatifomu ye-Agent Sauce iqoqo eliphelele lamamojula - kusuka kuwebhu, ukuphrinta, i-imeyili, iselula, ukusesha, ezenhlalo, kanye nevidiyo. U-Adam wayevame ukusebenzisa izinsizakalo ze-imeyili futhi abe nesikhathi esinzima esebenza ngezingqinamba zohlelo lwabo, ngakho-ke wazakhela eyakhe esikhundleni! Futhi unika amandla ipulatifomu yakhe ngama-API amaningi, enikeza isisombululo eshibhile kakhulu esingaba ngamakhulu noma izinkulungwane zamaRandi kunoma iyiphi enye imboni. I-Agent Sauce manje ithumela izigidi zama-imeyili namashumi ezinkulungwane zemiyalezo yamapeni edoli. U-Adam ukwazile ukudlulisa lokho kulondolozwa ngqo kumakhasimende akhe.
Lezi yizibonelo ezimbalwa nje lapho, esikhundleni sokunikeza ilayisense ipulatifomu ejwayelekile enokulinganiselwa okwedlulele, lezi zixazululo zakhiwa efwini, futhi kwesinye isikhathi zisebenzisa ama-API aqinile kakhulu. Izindlela zokuxhumana zomsebenzisi zenziwe zenzelwe uhlelo lokusebenza nomsebenzisi, futhi izinqubo zakhiwa ukuqinisekisa ukuthi abasebenzisi bangenza konke ngaphandle kwethoni yesikhathi abasichithe bemasaja idatha noma besebenza ngezinkinga zepulatifomu.
Ungawubukeli Phansi Umzamo Wokwakha
Kukhona okuhlukile. Ngasizathu simbe, izinkampani eziningi zikhetha ukuzakhela ezazo Uhlelo Lokuqukethwe Lokuqukethwe bese kuphenduka iphupho elibi. Lokho kungenxa yokuthi bathatha phansi inani lomsebenzi oludingayo kanye nenani lezici lezo zinhlelo ezinazo ezenza ukuthi indawo yokucinga ibe lula kanye nemithombo yezokuxhumana kube lula. Udinga ukuthi uqaphele kakhulu ekuhloleni ipulatifomu ongahle ungabi nakho nakho. Isibonelo, lapho sizakhela eyethu insiza ye-imeyili, besivele singochwepheshe ekulethweni nasekuthumeleni i-imeyili… ngakho-ke sazicabangela zonke lezo zici ezingeziwe.
Lokho kusebenza kahle lapho kulondolozwa khona izinkampani. Ungahle uthande ukubheka lokhu njengoba uhlaziya isabelomali sakho. Zikuphi izindleko zakho ezinkulu zokulayisense? Kubiza malini ukusebenza ngokulinganiselwa kwalawo mapulatifomu? Hlobo luni lokonga izindleko nokusebenza kahle inkampani yakho engakubona uma ipulatifomu yakhiwe ukuze ihambisane nezidingo zakho kunengxenye yonke yemakethe? Uma usebenzise izindleko zamalayisense ekuthuthukiseni unyaka ngamunye, ungashesha kanjani ukuba nesikhulumi ebesingumkhuba futhi esingcono kunezisombululo zemakethe?
Lesi yisikhathi sokuqala ukunquma ukuthi uzoqhubeka yini ukuthenga isisombululo somunye umuntu, noma wakhe ubuciko obaziyo ukuthi unganyathela igesi ngawo!
Tags: isosi yomenzeliApiyakha ipulatifomu ye-imeyiliukwakha noma ukuthengayakha ipulatifomu ye seoizindleko zentuthukoizindleko zobunikaziizindleko zokuthuthukisaUkuhlanganiswaizindleko zobunikazi